Dhawaan, Shiinuhu Galbeedka Mareykanka xamuulka badda wuxuu ahaa sixitaan muhiim ah oo ku aaddan dareenka suuqa, marka la barbar dhigo Sebtember 10, 20586 DOLLARS/FEU (weelka 40 cagood) oo sarreeya, hoos udhacay ku dhawaad ​​5000 doollar, hoos u dhaca wuxuu gaaray 22.25%. shirkadaha xamuulka ayaa xitaa sheegay in qiimaha xamuulka badda laga soo bilaabo dekedaha Ningbo iyo Shanghai ilaa WEST Coa ...
“Buundada Ganacsiga” - 130th Canton Fair Cloud Promotion of UAE ayaa loo qabtay si kor loogu qaado iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi ee labada dhinac ee qotada dheer
17kii Oktoobar, “Buundada Ganacsiga” ee isku xirta Dubai iyo Guangzhou ayaa lagu qabtay Carwadii 130aad ee Canton Fair si kor loogu qaado Imaaraadka Carabta (UAE) .Mr. Wu Yi, La -taliyaha Xafiiska Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ee Qunsuliyadda Guud ee Shiinaha ee Dubai, Mr. Xu Bing, Ku -xigeenka Xoghayaha Guud iyo Af -hayeenka Canton Fair iyo Agaasime Ku -xigeenka Shiinaha F ...
"Jiu Jiu" wuxuu u eg yahay "jiu jiu" Markaa Bandhigga Sagaalaad ee Labaad wuxuu leeyahay macno dheer Tan iyo wakhtiyadii hore Fuula buur waa caado dhaqameedka laba jibaarkii Tang Dynasty Abwaan Wang Wei mar qoray "Walaalaha fog fuula, dhammaan dogwoodku wuu yar yahay mid ”Noqo xukun caan ah oo lagu riday ...
Madxafka bandhigii ugu dambeeyay ee FIT waa janno dhulka ku taal
Calanku wuxuu ku dhawaaqayaa khadka bandhigga ee 27th Street ee Manhattan, si kastaba ha noqotee, booqdayaasha madxafka FIT ayaa laga yaabaa inay u diyaargaroobaan waxa iyaga ku sugaya "Soo jiidashada: Rose ee moodada." “Soo jiidasho leh: Rose in Fashion” waa bandhiggii ugu horreeyay kadib xidhitaanka machadka. Bandhigu wuxuu si furan u furmi doonaa 6 -da Agoosto ...
Ku soo dhowow inaad booqato oo aad iibsato Bandhigga Canton ee 130aad
Tartanka! Iyada oo halku-dhiggeedu yahay kor u qaadista wareegga laba-geesoodka ah ee gudaha iyo dibaddaba, Carwadda Canton-ka 130-aad ayaa lagu qaban doonaa onlaynka iyo khadka tooska ah Oktoobar 15-keeda ilaa 19-keeda. .
Rose Parade waa la joojiyay
Laba sano ka hor, kooxda North West Waukee iyo Waukee High band ayaa loo xushay inay ka qeybgalaan Rose Parade, laakiin safarkooda waa la baajiyay masiibada awgeed. Hadda way soo noqdeen. Kooxda ayaa ku tababartay garoonkooda cusub ee kubbadda cagta khamiistii si ay ugu diyaar garoobaan Rose Parade bisha Janaayo ee sannadkan. Waxay khamiis leeyihiin marti gaar ah. Bob Miller ...
Qiimaha dhuxusha oo sarreeya awgeed, waxaan helnay ogeysiiska korantada oo la jaray. Waxaan nahay Nasiib Madaama inta badan habka wax soosaarkeennu uu yahay mid gacanta lagu sameeyo. Laakiin wali waxoogaa saamayn ah sida hadda ah waqtiga ugu mashquulka badan inta lagu guda jiro sannadkan ubax macmal ah oo caleemaha ka baxa. Inta badan ubaxa madaxa, sida orchid, cagaarka, ubaxa cherry, Caleenta Eucalyptus waxay u baahan yihiin in gacanta lagu sameeyo, laakiin ...
Fasaxa Maalinta Qaranka
Toddobaadkan ayaa noqon doona fasax maalmeedka qaranka, caadiyan waa 7 maalmood oo fasax ah. Laakiin hadda waa xilligii ugu sarreeyey ee wax -soo -saarka iyo dhoofinta. Waxaan u baahanahay inaan helno shaqo dheeri ah si aan u dhigno jadwalka dhalmada. Hadda amar sugitaanku wuxuu ka socdaa Mareykanka, Kanada, Brazil, Poland oo leh Ubax Hydrangea, gabbaldayaha, ubax callas, iwm.
123456 Xiga> >> Bogga 1 /7